68 စီးရီးနက်ရှိုင်းသော Groove Ball ကိုဝက်ဝံ - တရုတ် Ningbo Shenhe ဝက်ဝံ
နက်ရှိုင်းသော Groove Ball ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်
နှစ်ချက် Row နက်ရှိုင်းသော Groove Ball ကိုဝက်ဝံ
self-align လုပ်ဖို့ Ball ကိုဝက်ဝံ
နှစ်ချက် Row angular ဆက်သွယ်ပါ Ball ကိုဝက်ဝံ
လေး Point သို့ဆက်သွယ်ပါ Ball ကိုဝက်ဝံ
non-နျ Standard Ball ကိုဝက်ဝံ
SHB R & D Center က
ကိုယ်ပိုင်-align Ball ကိုဝက်ဝံ
68 စီးရီးနက်ရှိုင်းသော Groove Ball ကိုဝက်ဝံ
63 စီးရီးနက်ရှိုင်းသော Groove Ball ကိုဝက်ဝံ
62 စီးရီးနက်ရှိုင်းသော Groove Ball ကိုဝက်ဝံ
နက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကို bearing ကိုလှိမ့ဝက်ဝံ၏တစ်ဦးအလွန်လူကြိုက်များအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံပုံစံတစ်ခုပြင်လက်စွပ်တစ်ဦးအတွင်းစိတ်လက်စွပ်, ဘောလုံးအစုတခုနှင့်လှောင်အိမ်အစုတခုပါဝင်ပါသည်။ အမျိုးအစားသက်သေခံကုဒ် 6. နက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကိုဝက်ဝံအဓိကအားဖြင့်စင်ကြယ်သော radial ဝန်ကိုဆောင်သောနှင့်အချို့သော axial ဝန်ကိုဆောင်သောနိုင်စွမ်းရှိနိုင်ပါသည်အတွက်အသုံးပြုနေကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။ နက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကိုဝက်ဝံစင်ကြယ်သော radial ဝန်ကိုထမ်းသောအခါသူထောင့်ကိုဆက်သွယ်သုညဖြစ်ပါတယ်။ နက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကိုဝက်ဝံ၏ပွတ်တိုက်ကိန်းအလွန်နိမ့်သည် ဖြစ်. , နက်ရှိုင်းသော groove ၏အမြန်နှုန်းကန့်သတ်သည်အလွန်မြင့်မားသည်။
Min.Order အရေအတွက်: 20000 အစုံ / အမိန့်
ကြာချိန်: 45 ရက်အမိန့်အပြီး
ဆိပ်ကမ်း: ရှန်ဟိုင်း, Ningbo
ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်မှ SHB သို့မဟုတ်အညီ
ဝန် Direction အဖွဲ့:
C2, C0, C3, C4, ဂ 5
SPCC, PA46, PA66, ကြေးနီ, သံမဏိ
ZZ, LL.B, Z ကို, LB, LLH, LLU, RS, 2RS, RZ, 2RZ
tube, Pallet, Rustproof စက္ကူ, ပုံး, လူပျို
က ISO / TS1 6949: 2009, ISO ကို 9001: 2008
အမှတ်စေ့စေ့စပ်စပ် နယ်နိမိတ်အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) အခြေခံပညာဝန် ratings (N) တို့ ကန့်သတ်အမြန်နှုန်း (rpm ပါ) mass (ဆ)
ဃ : D B က rsmin CR ကော အဆီ ဆီ
686 ဖွင့်လှစ်613 3.5 0,15 1080 440 39000 46000 1.9
ဖွင့်လှစ် 13 3.5 0,15 1080 440 39000
689 ဖွင့်လှစ်91740.2 1720 820 33000 39000 3.2
6800 ဖွင့်လှစ် 10 1950.3 1830 925 32000 38000 5
6801 ဖွင့်လှစ် 12 2150.3 1920 1040 29000 35000 6
6802 ဖွင့်လှစ် 15 2450.3 2080 1260 26000 31000 7
6803 ဖွင့်လှစ် 17 2650.3 2230 1460 24000 28000 8
6804 ဖွင့်လှစ် 20 3270.3 4000 2470 21000 25000 19
6805 ဖွင့်လှစ် 25 3770.3 4300 2950 18000 21000 22
6806 ဖွင့်လှစ် 30 4270.3 4700 3650 15000 18000 26
6807 ဖွင့်လှစ် 35 4770.3 4900 4050 13000 16000 29
6808 ဖွင့်လှစ် 40 5270.3 5100 4400 12000 14000 33
6809 ဖွင့်လှစ် 45 5870.3 5350 4950 11000 12000 40
နက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကို bearing ကိုလှိမ့ဝက်ဝံ၏တစ်ဦးအလွန်လူကြိုက်များအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံပုံစံတစ်ခုပြင်လက်စွပ်တစ်ဦးအတွင်းစိတ်လက်စွပ်, ဘောလုံးအစုတခုနှင့်လှောင်အိမ်အစုတခုပါဝင်ပါသည်။ အမျိုးအစားသက်သေခံကုဒ်6ဖြစ်ပါတယ်။
နက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကိုဝက်ဝံအဓိကအားဖြင့်စင်ကြယ်သော radial ဝန်ကိုဆောင်သောနှင့်အချို့သော axial ဝန်ကိုဆောင်သောနိုင်စွမ်းရှိနိုင်ပါသည်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ နက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကိုဝက်ဝံစင်ကြယ်သော radial ဝန်ကိုထမ်းသောအခါသူထောင့်ကိုဆက်သွယ်သုညဖြစ်ပါတယ်။ နက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကိုဝက်ဝံပိုကြီး radial ရှင်းလင်းရေးရှိပါကသူတို့အဖြစ် angular အဆက်အသွယ်ဘောလုံးကိုဝက်ဝံလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ နက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကိုဝက်ဝံ၏ပွတ်တိုက်ကိန်းအလွန်နိမ့်သည် ဖြစ်. , နက်ရှိုင်းသော groove ၏အမြန်နှုန်းကန့်သတ်သည်အလွန်မြင့်မားသည်။ ထို့ကြောင့်, ဆောင်သောနက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကိုမြန်နှုန်းမြင့်နဲ့ကြီးမားတဲ့ axial ဝန်များ၏အခြေအနေအောက်တွင်အနေဖြင့်ထိုးဘောလုံးကိုဝက်ဝံထက်သာလွန်ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ 60, 62,63, 67, 68,69 နှင့် 1600 စီးရီးနက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကိုဝက်ဝံအများအားဖြင့်သံမဏိပန်းကန်သိုးထီး-shaped လှောင်အိမ်၏လုပ်, ဒါပေမယ့်လည်းပလတ်စတစ်လှောင်အိမ်များနှင့်ကြေးနီလှောင်အိမ်အင်ဂျင်နီယာနေကြသည်။ အဆိုပါတံဆိပ်ခတ် bearing ကွဲပြားခြားနားပါသည်အခြေအနေများအရသိရသည်ဝက်ဝံများအတွက်အထူးချောဆီကိုအမဲဆီတပ်ဆင်ထားသည်။
60, 62,63,67, 68 နှင့် 1600 စီးရီးဆောင်သောအေနက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကို
ခဒင်္လက်စွပ် groove နှင့်အတူဆောင်သောအဆိုပါနက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကို 6000-N 6200-N 6300-N 6700-N 6800-N 6900-N နှင့် 1600-N ကိုအမျိုးအစားဖြစ်၏
C. တဦးတည်းဘက်မှာဒိုင်းလွှားကိုဆောင်သောအဆိုပါနက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကို: စသည်တို့ကို 6000-Z ကိုတူ
စသည်တို့ကို 6000-ZZ ကဲ့သို့: နှစ်ဦးစလုံးဘက်မှာဒိုင်းလွှားနှင့်အတူ
6200-RS, စသည်တို့ကဲ့သို့သောတံဆိပ်ခတ်လက်စွပ် (အဆက်အသွယ်အမျိုးအစား) နှင့်အတူဆောင်သောတစ်ဦးကနက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကို,
စသည်တို့ကို 6200-2RS, တူ, နှစ်ဦးကိုဘက် (အဆက်အသွယ်အမျိုးအစား) ရက်နေ့တွင်ကွင်းပိတျထားသောနဲ့အတူ
စသည်တို့ကို, 6200-rz ကဲ့သို့တစ်တံဆိပ်ခတ်လက်စွပ် (အလင်းအဆက်အသွယ်အမျိုးအစား) နှင့်အတူဆောင်သောတစ်ဦးကနက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကို;
နှစ်ခုဘက် (အလင်းအဆက်အသွယ်အမျိုးအစား) ရက်နေ့တွင်ကွင်းပိတျထားသောအတူ 6000-2RZ နဲ့တူ, etc
60, 62,63,67, 68 နှင့် 1600 စီးရီးနက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကိုဝက်ဝံကျယ်ပြန့်အသုံးပြုသူ၏လိုအပ်ချက်အရစသည်တို့ကိုမော်ဒယ်လေယာဉ်အဝေးထိန်းမော်တော်ယာဉ်များ, စက်ကိရိယာများ, မော်တာ, ရေစုပ်စက်, စိုက်ပျိုးရေးစက်ပစ္စည်း, အထည်အလိပ်စက်ယန္တရားအတွက်အသုံးပြုကြသည် , SHB အဆင့်မြင့်တိကျစွာ (P0, P6, P5), အမျိုးမျိုးသောရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့များသည်အထူးတုန်ခါမှုနှင့်ဆူညံသံလိုအပ်ချက်များ (Z1, Z2 သို့မဟုတ် V1, V2) ၏နက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကိုဖြစ်စေသောစပါးထုတ်လုပ်နိုင်ကြသည်။
ယခင်: 63 စီးရီးနက်ရှိုင်းသော Groove Ball ကိုဝက်ဝံ
နောက်တစ်ခု: နှစ်ချက် Row angular ဆက်သွယ်ပါ Ball ကိုဝက်ဝံ
နက်ရှိုင်းသော Groove Ball ကိုစေ့စေ့စပ်စပ် 2rs
လက်မှတ်ရနက်ရှိုင်းသော Groove Ball ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်
16 စီးရီးစေ့စေ့စပ်စပ်နက်ရှိုင်းဂရုဗ် Ball ကို
62 စီးရီးစေ့စေ့စပ်စပ်နက်ရှိုင်းသော Groove Ball ကို
နက်ရှိုင်းသော Groove Ball ကို 6202-2rs စေ့စေ့စပ်စပ်
နက်ရှိုင်းသော Groove Ball ကို 68 စီးရီးစေ့စေ့စပ်စပ်
69 စီးရီးစေ့စေ့စပ်စပ်နက်ရှိုင်းဂရုဗ် Ball ကို
နက်ရှိုင်းသော Groove Ball ကိုလက်ကားစေ့စေ့စပ်စပ်
နက်ရှိုင်းသော Groove Ball ကို non-နျ Standard ဝက်ဝံ
နက်ရှိုင်းသော Groove စေ့စေ့စပ်စပ်
နက်ရှိုင်းသော Groove ဖွဲ့စည်းပုံ
Groove Ball ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်
လက်မနက်ရှိုင်းသော Groove Ball ကိုဝက်ဝံ
သတ္တုနက်ရှိုင်းသော Groove Ball ကိုဝက်ဝံ
non-နျ Standard နက်ရှိုင်းသော Groove Ball ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်
ဘီး Hub နက်ရှိုင်းသော Groove ဝက်ဝံ
60 စီးရီးနက်ရှိုင်းသော Groove Ball ကိုဝက်ဝံ
69 စီးရီးနက်ရှိုင်းသော Groove Ball ကိုဝက်ဝံ
67 စီးရီးနက်ရှိုင်းသော Groove Ball ကိုဝက်ဝံ
1600 စီးရီးနက်ရှိုင်းသော Groove Ball ကိုဝက်ဝံ
50 Xiantan လမ်းမကြီး Langxia လမ်း Yuyao City Zhejiang ပြည်နယ်
t များ၏ပြိုင်ပွဲအတွက် 1st Prize ကိုအနိုင်ရ ...